Hoggantoonni Biyyoota Afurii Dhimma Nageenya Suuriyaa irratti mari’achuuf Istanbul seenan - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Eeshiyaa/Hoggantoonni Biyyoota Afurii Dhimma Nageenya Suuriyaa irratti mari’achuuf Istanbul seenan
Hoggantoonni Biyyoota Afurii Dhimma Nageenya Suuriyaa irratti mari’achuuf Istanbul seenan
Dhimma Nageenya Suuriyaa ilaalchisee marii Turkiyaan qopheessite irratti hirmaachuuf, Prezdaantonni Ruusiyaa fi Faransaay akkasumasas Chaansilariin Jarman Sabtii har’aa Istanbul seenaniiru. UN’tti Itti gaafatamaan dhimma Suuriyaa Isteefan Dimastuura marii kana irartti kan hirmaatu yoo tahu, walgahii booda hoggantoonni afran ibsa ni kennu jedhamee eggama.
Prezdaant Rajab Xayyib Erdogaan dabalatee hoggantoonni afran lola Suuriyaa keessatti geggeefamaa jiru ilaalchisee dhimmota heddu irratti mari’achuuf kan karoorfatan yoo tahu, kanneen keessaa ijoon Suuriyaa keessatti naannawa walitti bu’iinsa irraa bilisa tahe dhaabuu fi nageenyi itti fufiinsa qabu biyyattii keessatti akka bu’u furmaata Siyaasaa barbaaduudhaaf tahuu gabaasni arganne ni ibsa. Dabalataanis Idliib keessatti nannawa meeshaa waraanaa irraa bilisa tahe dhaabuudhaaf waligaltee kanaan dura Turkiyaa fi Ruusiyaan godhan, naannolee biroo keessatti babal’isuuf kallattiin kan kaayamu tahuu gabaasichi ni ibsa.
Lola Suuriyaa waggaa 7 oliif geggeeffamaa jiru kana, biyyoonni heddu kallatti gara garaatiin harka keessa naqatanii jiru. Haaluma kanaan Turkiyaan gareewwan finciltoota Suuriyaa tokko tokko kan deeggartu yoo tahu, Ruusiyaan ammoo Iiraan waliin tahuun mootummaa Suuriyaatiif gargaarsa ol’aanaa kennaa jirti.
Lola suuriyaa Turkiyaa
May 30, 2020 sa;aa 10:49 am Update tahe